Pearson Schools | Wayilwela Inkululeko: Nelson Mandela
Author(s):Pampallis, K Series editor: Pampallis, J Consulting editor: van Wyk, C
Lo mntwana uya kuthiywa igama elithi nguRholihlahla,' watsho uyise mhla waqala ukubona unyana wakhe. Eli gama lithetha "ukurhola ihlahla lomthi" kodwa linako ukutolikwa njengo-"Dal'uqhushululu".
Le ncwadi igocagoca ubomi bukaRholihlahla Nelson Mandela, obesakuba nguMongameli womZansti Afrika. Le ncwadi ibalisa ngokuzinikezela ngokungenaxanasi kumzabalazo olwa ucalucalulo, kwaneenzima awadibana nazo xa wayesentolongweni kwiminyaka engama-27.
Intetho kaMandela xa wayephuma entolongweni ihamba yenjenje, 'Zihlobo, maqabane, bantu bonke bomZantsi Afrika. Ndinibulisa nonke egameni loxolo, inkululeko kawonke-wonke nolawulo lomntu wonke.' Inkululeko kaMandela yothetha-thethwano yakhokelela kumZantsi Afrika okhululekileyo kawonke-wonke.
Wayilwela Inkululeko, le ncwadi ibalisa ngobomi beenkokeli zeli lomZantsi Afrika ezalwela inkululeko yobulungisa. Phantsi kwale ndima ibalulekileyo bayidlalayo kwimbali zomZansti Afrika, uninzi lwezi nkokeli alulibaleki kwiincwadi zeembali. Ezi ncwadi zibhalwa njengabonwabisi kwaye ulwimi lwazo kunye neenjongo zazo zicace gca okwekati emhlophe ehlungwini, kuba zigcina ubuncwane apho bufaneleka buthi gingci khona kwiimbali zeli.